VERBENA OFFICINALIS: ISTICMAAL, QALABAYNTA DAAWEYNTA IYO KHILAAFAADKA - DHIRTA DAWOOYINKA
Ugu Weyn Ee Dhirta dawooyinka
Waa maxay faa iido waxtar leh
Tan iyo wakhtiyadii hore, Verbena officinalis caan waa caan ku ah hantida kala duwan ee faa'iidooyinka. Celtic Druids waxay u yeedhay "quduus ah." Verbena waxaa u adeegsan jiray dhakhaatiir iyo dhakhaatiir ku takhasusay caafimaadka.
Qodobkani, waxaan ka fiirsan doonaa halbeegyada kiimikada, sifooyinka daawooyinka waxtarka leh ee verbena, xanibaadda isticmaalka, isticmaalka cunto karinta, ururinta iyo keydinta qalabka cayriin ee verbena.
Waxyaabaha kiimikada ah ee verbena officinalis
verbena qayb kasta oo hodan ku saliidaha lagama maarmaanka ah, ayaa qadhaadh ah, iyo steroids xab (sitosterol) hastatozid, fareeshka ah, flavonoids (artemetin) iridoidglikozid (verbenalin), triterpenoids (lupeol, ursolic acid), carotenoids, verbenamin, aucubin, silicic acid, vitamins yaryar iyo macruufiyeyaasha. Verbena waxaa ku jira caleemo ascorbic ah.
Ma taqaanaa? Qiyaastii laba boqol oo nooc oo fayruus ah ayaa la yaqaanaa, laakiin keliya hal - Verbena officinalis - waxaa loo isticmaalaa daawada.
Guryaha dawooyinka ee Verbena officinalis
Qeybaha daawooyinka ee verbena aad ayey u weyn yihiin. Verbena waxay u dhaqmaysaa sida dhiig-nadiifinta, anti-bakteeriyada, anti-bararka, antiviral iyo aaftirka. Waxay sidoo kale hagaajin kartaa hawsha beerka, dheefshiidka cuntada, kordhinta rabitaanka cuntada iyo dib u soo celinta unugyada jidhka, qarsoonida casiirada caloosha ayaa kordhisa, dheef-shiid kiimikaadku ku noqdaan caadi.
Diyaargarasyo ​​ay ku jirto fayruusku waxay caawiyaan yareynta heerkulka, kordhinta dhididka iyo xitaa, ka saar nabarrada muruqyada. Citral wuxuu awoodaa in uu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga, wuxuu qabaa ficil-celinta iyo ficil-celinta. Verbena waxaa lagu daaweeyaa xinjirowga dhiiga (thrombosis), tromboflebitis, rheumatism iyo turjumaan.
Wax ku ool ah sidoo kale mashiinka nadiifinta ee faleenka. Waxaa lagu riyaaqaa guryaha dabiiciga ah, si sax ah, sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa xanuunka caloosha, dheef-shiid kiimikaadka, maqnaanshaha cuntada.
Verbena waxay si fiican u caawisaa dhiig-yaraanta, xasaasiyad kala duwan, colka mindhicirada, cholecystitis, gastritis, cagaarshowga, laryngitis, cudurada catarrhal, oof-wareenka, iyo sidoo kale waxa uu leeyahay guryaha antiseptic.
Waa muhiim! Qiyaaso badan, flavonoids iyo glycosides oo faa'iido u leh jirka bani-aadmiga ayaa lagu kaydiyaa ficil-gale.
Isticmaalka daawada verbena ee cudurada
Verbena waxaa lagu kala saaraa tiro badan oo ka mid ah dhismooyinka daawooyinka, waxaana markaa loo isticmaalaa daaweynta cudurada kala duwan: hargabka iyo hargabka, qufaca, atherosclerosis, hurdo la'aan iyo madax xanuunka, madax xanuunka iyo ilka xanuunka, laabmaatinka, gout, duufan xanuunka, dhiig-baxa, caadada oo liita jirka, kuwa kale.
Ma taqaanaa? Saaxiriyayaashii hore waxay tixgeliyeen in gawaarida loo yaqaan 'cows' ah oo dhammaystiran. Waxay rumaysnaayeen in haddii jidhka lagu xardhay cawska, ka dibna wax kasta oo la rabo waa run.
Ka takhalus qufaca ayaa ku caawin doona decoction iyo shaaha laga soo galokaas oo la diyaarin karaa by shuban qaado ah ee caleemaha Verbena iyo ubax leh galaas biyo ah karkaraya iyo tegaayo in jeermiska 20 daqiiqo. Faleebo waa lagama maarmaan in la isticmaalo gudaha gudaha afar jeer maalintii kahor cuntada.
Qabow iyo ifilada
Verbena waa caawiye wax ku ool ah oo lagaga hortago hargabka aadka u xun (buruqda, baranbarada, ARVI iyo kuwa kale). Waxay yareysaa heerkulka jidhka si caadi ah. Waxa kale oo uu leeyahay hanti farsameed (marin-hawo nadiif ah).
Xanuunada, daaweyntu waa lagama maarmaan. Verbena shaahoo sidan loo sameeyo: waxaad soo saartaa hal qaado oo cawska cawska ah nus litir ah oo biyo karkaraya ah, karkari shan daqiiqo, ka dibna u diyaari labaatan daqiiqo, ka dibna marinka la shaandheeyo iyo saddex ilaa afar jeer maalintii, 50 ml.
Insomnia iyo Migraine
Herb Verbena Tinctures si aad ah qiimo weyn ugu leh dagaalka lagula jiro insomnia, madax-xanuun iyo madax-xanuunka dhanjafka. Dhibaatooyinkan, faleebo ah ayaa la sameeyey, diyaarisay sida soo socota: Ku shub laba shaambo oo ah qufac verbena oo leh 200 ml oo biyo ah kaddibna 10 daqiiqo ka dib markaad adkeysid, qaado laba jeer maalintii 100 ml (saacad iyo badh ka hor cunto).
Malaha mid ka mid ah waxyaalihii faa'iidada ugu fiicnaa ee verbena waa anti-atherosclerotic. Verbena waxay si fiican u nadiifisaa weelasha muraayadaha hoose ee maaddada "cholesterol". Isla mar ahaantaana, wareegga dhiigga ayaa si weyn u hagaajiya, iyo khatarta qaadista cudurrada wadnaha iyo xididada ayaa yareynaya.
Recipe for faleebo halka cudurkani uu yahay mid fudud: Ku shub dhowr shaambadood oo caleemo leh hal galaas oo biyo ah karkaraya iyo cadaadis kadib saacado yar kadib. Qaadi hal qaado oo hal qaado ah saacad kasta.
Daalidda jirka iyo kacsanaanta dareenka
Verbena waxay si fiican u badbaadineysaa daal, luminta xoog iyo daal daba dheeraatay, waxay ku jirtaa, waxay siinaysaa awood waxayna hagaajineysaa habka jirka. Sidoo kale, isticmaalka geedi-yari waxay ciribtiraysaa dhibaatooyin badan oo leh maskaxda iyo habdhiska dareenka - dareen xoog leh oo culus iyo walbahaarka, xanuunka dareenka iyo xannibaad xoog leh, niyadjab, qallayl iyo suuxdin.
Sidaa daraadeed waxaan u diyaar gareynaa sidan oo kale decoction: Kudar galaas oo biyo ah karkar leh hal qaado oo salbena ah, cadaadis kadib laba saacadood kadibna qaado seddex jeer maalintii 100 ml.
Xadgudubka wareegga caadada
Saliid muhiim ah iyo faleebo verbena officinalis waxay kaa caawineysaa haweenka aan ku filnayn iyo mudada yar. Verbena waxay caadi u tahay caadada caadada dumarka waxayna si weyn u yareyneysaa calaamadaha PMS iyo menopause, waxay ka caawisaa in laga gudbo cuncunka ku dhaca xubinta taranka. Wixii faleebo cabitaanka, la diyaariyey sida ay isku midka ah sida la jeexjeexay iyo hurdo la'aan.
Sida loo isticmaalo qallaylka maqaarka
Guryaha bogsashada ee fayruuska waxaa loo isticmaalaa maqaarka. Lootions, washings and compresses of verbena waxaa loo isticmaalaa cudurrada maqaarka iyo kuwa faafa ee xasaasiyad leh - finan, finan, boogo, boogo, cambaarta, isnadaamis, furunculosis, neurodermatitis, psoriasis, scrofula, lichen planus, iyo sidoo kale adagtahay in lagu bogsado nabarrada.
Faleebo cudurada maqaarka fududahay inaad kariso: Saddex qaado oo ah caleemo la jarjaray ayaa la dhajiyay nus litir oo biyo ah karkaraya, ka dibna waxaa lagu duudduubay si aan u qaboojinayn, waxayna degeen saddex saacadood. Waxaa loo isticmaalaa sida looska iyo cadaadiska, kaliya ee qaabka kuleylka. Dhibaatooyinka adag ee adag iyo burooyinka ayaa lagu dabaqaa dusha sare ee caleemaha qallalan.
Waa muhiim! Isticmaalka dib udajinta vervaina ayaa suurtogal ah qaabka biyo raacinta si looga takhaluso neefta xun iyo caabuqa cirridka.
Diyaarinta iyo kaydinta alaabta ceeriin ee caanaha
Daawada qashinka ah ee Verbena - tani waa qeybta dhan ee aboveground ee geedka iyo xididka falka.
Verbena officinalis waxay u socotaa Inta lagu jiro xilliga ubaxu (Julaay, Agoosto, Sebtembar), waa markaa dhirta ay leedahay inta ugu badan ee saliida lagama maarmaanka ah (ilaha citral).
Rootiyada goosashada guga iyo dayrta. Qalajinta weelka shaqada ee hooska hawada cusub, ku faafay lakab khafiif ah, ama qallajiye khaas ah. Kaydinta alaabta ceeriin ee daawada meel qallalan.
Ma taqaanaa? Verbenu waxaa loo arkaa cawska toddobaad ee Venus.
Daawada Verbena ee karinta
Isticmaalka vervaina ee karinta ayaa si ballaaran loo yaqaan. Waxaa loo isticmaalaa diyaarinta marinades iyo pickles, si ay ugu dhejiyaan urka urka iyo xoogga jilicsan, iyo qaybta anteenada ee fiilada, marka uu ubaxleeyo, waxaa loo isticmaalaa sida shaaha.
Waxyaabaha ay ku jiraan fayruusku waa ka hortag dadka qaba xanuunka shakhsiyeed ee shakhsiyaadka iyo dhiig-baxa.
Daaweynta waa in la xaddido. carruurta ka yar 14 jir, iyo sidoo kale waa lagama maarmaan in laga fogaado shaaha iyo fusada, decoctions iyo saliid muhiim ah haweenka uurka leh maaddaama ficillada ficil-celinta loo yaqaan 'uterine tone', taas oo horseedi karta cawaaqib xumo - dhalmo bilo ama ilmo iska soo ridid. Inta lagu jiro nuujinta Vervain waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya markaad la tashato dhakhtarkaaga.
Waa muhiim! Isticmaalka daroogada oo joogto ah oo la adeegsado verbena waxay sababi kartaa dhibaatooyin dheecaanka mindhicirka. Waa lagama maarmaan in dhakhtar la tago kahor inta aan la isticmaalin verbena, si uu u doorto qiyaasta saxda ah iyo qaabka daroogada iyo mudada daaweynta.
Sida aad arki karto, Verbena waxay leedahay noocyo badan oo bogsoon ah, iyo aqoonta sida loo daaweeyo cudur gaar ah leh verbena waxay noqon doontaa mid waxtar leh qof walba.
Iskudhiga sare ee canab oo ah canab Xilligii xafladaha Kherson summer
Faahfaahinta kulubka guud ee ukunta "Stimul-1000"
Casriga hore ee Faransiiska - canabka Chardonnay
Waa maxay geedka gooryaanka?
Sifooyinka ganacsiga faa'iido leh ama sida loo aasayo beerista, daryeelka iyo quudinta ee digaagga broiler?
Geedka canjiga ah ee xilliga dayrta
Beerista dhirta dayrta
Cuntada guriga lagu kariyo
Daryeelka roodhida ee dayrta
Kobocashada qajaarka ee dhulka furan
Dadku waxay isticmaali karaan caanaha laga helo noocyo kala duwan oo ah geedo: lo'da, riyaha, llamas, buffaloes, geela, fardaha, idaha. Waxaa ugu caansan, dabcan, waa lo'da. Midda labaad, oo leh marin ballaadhan, waa riyo. Hase yeeshee, tani ma sheegeyso midkee faa'iido u leh caafimaadka. Caanaha riyaha ma ka duwan yihiin lo'da? Qalabku wuxuu ka duwan yahay noocyada kala duwan ee xayawaanka ah ee ku jira maaddada dufanka, content of lactose, iyo jiritaanka macro-iyo mareeyn. Read More
Dhammaan wixii ku saabsan sida loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo si loo abuuro cagaarka kala duwan ee sanadka oo dhan
Noocyada aan caadiga ahayn ee orchids - sharaxaad iyo sawir
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta dawooyinka 2019